Ivon-toeram-pitsaboana homamiadana fitsaboana Proton Radiation - Proton any California
Rahampitso tsara kokoa
Miady amin'ny homamiadana
Raha vao voalohany ianao no voamarina, na voan'ny homamiadana miverimberina, ny fitsaboana proton dia mety ho safidinao tsara indrindra amin'ny iray amin'ireo fitsaboana homamiadana azo antoka sy mahomby indrindra manerantany.
Ny fitsaboana ny proton dia safidy tsy dia misy dikany loatra, natokana ho an'ny karazana kansera maro izay natoraly ara-tantara tamin'ny alàlan'ny fomba nentim-paharazana toy ny fandidiana, fitsaboana simika ary taratra X-ray. Miorina ao San Diego, Ivontoerana ho fitsaboana fitsaboana momba ny homamiadana any Kalifornia no ivon'ny fikarakarana ara-pitsaboana, fikarohana ary fikarohana biôtôlôjia. Miaraka amin'ny fanandramana proton mitambatra efa ho 50 taona mahery, ny dokotera malaza manerantany dia mampiasa ny fitsaboana sy fitaovana miady amin'ny homamiadana revolisionera miady amin'ny fitsaboana kansera sy tsy fahita firy.
Fitsaboana taratra Tumor
Navoaka tamim-pahatapahana tao anatin'ny 2 milimetatra, ny teknolojia fanodinana ny vatan-java-manodinam-bolo, izay atolotra ao amin'ireo efitrano fitsaboana dimy rehetra, dia mamoaka taratra famonoana famonoana homamiadana izay mifanaraka tsara amin'ny endrika sy ny haben'ny fivontosana. Ity teknolojia tena kinendrika ity dia manafika ny fivontosana amin'ny alàlan'ny famandrihana toy ny laser, ary mandehandeha manodidina ireo tavy sy taova mahasalama.
Ivon-toeram-pitsaboana San Diego Cancer
Trano iray amin'ireo ekipa onkolojian'ny oncology efa za-draharaha indrindra eran'izao tontolo izao ao amin'ny toeram-pitsaboana fitsaboana proton, ny dokoterantsika dia eken'ny sehatra iraisam-pirenena sy tadiavin'ny marary erak'izao tontolo izao. Raha ny marina, ny talen'ny fitsaboana anay dia efa nitsabo ny traboina homamiadan'ny prostaty maherin'ny 10,000 - mihoatra ny olona rehetra manerantany.
Mianara bebe kokoa momba ny foibe fitsaboana ny homamiadana anay.
Ivontoerana fitsaboana ny homamiadana
Avy amin'ny dokotera anay mba hanatontosana serivisy hanohanana programa, manolotra ny taha ambony indrindra amin'ny fikarakarana manokana ny marary ao amin'ny foibem-pitsaboana homamiadana izahay. Ny mpiasa ato aminay dia natokana ho an'ny adin'ny tsirairay amin'ny homamiadana ary isan'andro izahay dia miezaka mamorona tontolo iainana izay ahitan'ny marary anay, ny fianakaviany sy ny namany azy ireo fa misy vondrom-piarahamonina feno olona sariaka sy manampy izay mitondra ny olona rehetra tahaka ny ataon'ny olona ao amin'ny fianakaviany manokana.
Mety amiko ve?
Ny fitsaboana radiation radiation proton dia azo ampiasaina manokana, na miaraka amin'ny fandidiana sy ny fitsaboana ara-simika, mba hitsaboana karazana homamiadana sy fivontosana maro, ao anatin'izany fa tsy ferana amin'ny:
Kanseran'ny loha sy hatoka
Ny fivontosan'ny atidoha sy ny lamosina
Fahazavana X-Ray Fenitra
Ny taratra X-ray manara-penitra sy ny fitsaboana proton dia samy radioteran'ny "beam ivelany". Na izany aza, ny toetran'ny tsirairay dia samy hafa ary miteraka fihenan'ny tara-pahazavana amin'ny tranokan'ny fivontosana sy ireo taolam-paty ary taova manodidina.
Fanontaniana momba ny fandrakofana fiantohana sy ny fitsaboana?
Ny fitsaboana ny proton dia 'mpivarotra lalao'. Tsy andro iray no nandehanako ka tsy eritreretiko hoe tena sambatra izahay ny niaina enina kilaometatra lavitra ny iray amin'ireo foibe proton tsara indrindra eran'izao tontolo izao. Mahagaga ny mpiasa rehetra. Ny fangoraham-po sy ny fahalalàna ary ny fanarahana dia tsy mahagaga.
Rain'i Kasey Harvey
Patient Rhabdomyosarcoma Patient
Tsy dia nisy vokany ratsy tamin'ny fitsaboana nataoko. Nanofana ireo ekipako miampita ireo lehilahy sy vehivavy aho nandritra ny fitsaboana rehetra, nefa tsy nahita andro iray. Notazomiko foana i JoAnn vadiko ary nitazona ny maha-mpifankatia anao aho ary mijanona ho mazoto amin'ny maha-ray sy mpampianatra ahy ao amin'ny vondrom-piarahamonina.
Ny marary maramiadana
Nisafidy fitsaboana proton izahay noho ny fahafahany mitroka soa aman-tsara ao amin'ny atidoha mba hahatratra ny ampahany amin'ny fivontosana izay tsy azo nokasihina teo aloha. Ary satria ny teknolojia ao California Protons no vao haingana sy mandroso indrindra ao amin'ny firenena, dia nieritreritra izahay hoe 'maninona no misy any ho any?'
Rain'i Natalie Wright
Ny marary tsimokaretina ao amin'ny atidoha
Bilaogy momba ny fanantenana, ny fanasitranana ary ny hery handresena. Hamaky bebe kokoa